Wasiirkii hore ee Amniga oo xilka wareejiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirkii hore amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo is casilay dhamaadkii bishii hore Maya kadib markii Alshabaab weerareen baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilka wareejiyey iyadoo aan weli la magacaabin wasiirkii badeli alahaa.
C/kariim Xuseen Guuleed ayaa maanta xilka u wareejiyay ku simaha xilka wasiirka amniga Qaranka ahna wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Wasiikii hore ee Amniga Soomaaliya C/kariim Xuseen Guuleed oo ka hadlay xil- wareejinta ayaa sheegay inuu dadka Soomaaliyeed ka dalbanayo inay cafiyaan wixii dhibaatooyin ah ay ka tirsanayaan.
Sidoo kale, Guuleed ayaa ka dalbaday wuxuuna ka dalbaday shaqaalaha wasaaradda ammaanka qaranka iyo weliba taliyeyaasha ciidamada wasaaraddaas hoos-imaanayay iney ka cafiyaan wixii dhib ah ee ay ka tirsanayaan.
“Intii aan shaqada amniga hayay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay iga cafiyaan wixii khalaad ah ee ay iga tirsanayaan; maadaama howsha aan hayay ay ahyd mid saameyn ku yeelan karta qof walba oo Somalia ah,” ayuu yiri ku yiri hadalkiisa.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in amarradii uu bixinayay ay ahaayeen kuwo uu ugu adeegayo qaranka Soomaaliyeed, balse ujeeddadiisu aysan ahay inuu ku dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.
Maxamed Sheekh Xasan Xaamud aoo ah wasiirka gaashaandhigga oo xilkan si KMG ah u haynaya oo isna ka hadlay goobta ayaa ka dalbaday shaqaalaha wasaaradda inay la shaqeeyaan inta laga soo magacaabayo wasiir xilkan kala wareega.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa xilkan iska casilay 24-kii bishii May ee lasoo dhaafay, kaddib markii Al-shabaab ay weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo socday muddo shan saac oo xiriir ah.
Weerarkaas waxaa ku geeriyooday ku dhawaad 20 ruux oo isugu jiray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ragii ka tirsanaa Alshabaab ee xarrunta weeraray.
Xukuumada Somalia oo soo dhaweysay safiirka USA